ISundowns ikhuza ubugwala kwiChiefs | News24
ISundowns ikhuza ubugwala kwiChiefs
Durban - Izinsongo ezinzima ngaphambi komdlalo obhekwe ngabomvu ngabathandi bebhola njengoba kuwumbango wasesicongweni.
IKaizer Chiefs izodudulana ne-Mamelodi Sundowns kowe-Absa Premiership ngoMgqibelo ngo-20h15 eFNB Stadium, eSoweto. Lo mdlalo ubhekwe ngabomvu ngabathandi bebhola njengoba la makilabhu elwela isicoco seligi.
ISundowns iyizimfivilithi ukunqoba lesi sicoco njengoba isele ngemidlalo eminingi uma iqhathaniswa namanye amakilabhu.
Isele ngemidlalo emine uma iqhathaniswa ne-Cape Town City eqhwakele.
Nokho amaphuzu angakaqoqwa asuke esafana nento engekho njengoba kusuke kusengenzeka noma yini kuleyo midlalo.
Kumanje iDowns idonsa kanzima njengoba isigijime imidlalo emithathu inganqobi.
OLUNYE UDABA: ISundowns idinwa ngelikapotsho kwi-CAF
U-Erick "Tower" Mathoho oyisitobha seChiefs, uthi bazofaka usawoti esilondeni seDowns.
"Siyakuqonda ukuthi iSundowns ayenzi kahle kodwa nathi ngokunjalo asenzi kahle okusho ukuthi kufanele siwunqobe lo mdlalo. Lo mdlalo yiwona ozosicacisela ukuthi sizosithola isicoco seligi noma ngeke. Ukuze ube yingqwele kufanele unqobe imidlalo emikhulu njengalona.
"Kodwa-ke asinavalo, sesibabonile lapho bebuthaka khona sizosebenza ngakho. Ngifuna ukukubeka kucace ukuthi kulo mdlalo sizoshayelela isipikili sokuthi iDowns ngeke isivikele isicoco sayo. Izogoduka izinhliziyo zabalandeli bayo zibuhlungu yinto esizoyenza kuyona," kusho uMathoho obekhala ngokuthinteka eqakaleni njengoba ubegijima emibili yesihle yeBafana Bafana.
UTebogo Langerman odlala emuva kwiDowns naye obekwiBafana, uthi iChiefs ayibathusi ngisho belele.
"Ifomu yethu yakamuva akusikho ngoba iSundowns ibibheda inkinga wukuthi amakilabhu ebesibhekene nawo abedlalisa okwamagwala avele ayogcwala emuva angafuni ukudlala, apake ibhasi. IChiefs ingasindiswa wukuthi yenze lokhu okwenziwe yila makilabhu ebesidlala nawo kodwa uma ike yawudedela umdlalo sijahane, lapho angingabazi sizoshiya kukhalwa.
"Sike sakwenza lokho phambilini angiboni kukhona okuzosivimba. Lo mdlalo uyafana neminye kithina wukuthi wona nje sidlala nekilabhu enezinjongo ezifana nezethu okuwukunqoba isicoco seligi. Kodwa-ke angingabazi ukuthi kuzogcina thina," kusho uLangerman.
IDowns isabambe umoya ngoKhama Billiat oqalile ukujima ngeledlule emuva kokumiswa kabi wukulimala. Kulindwe odokotela ukuba banqume ngaye lingakapheli leli sonto.